Akhriso:- Gabadh lagu silciyay xabsiga Hargaysa oo kasheekeysay dhibtii la mariyay “Cunto iska dhaafee xitaa Xabad kaniini ayaa la iidiiday anoo tabcaan ah”.
January 12, 2019 marqaan Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta 3
WQ:- Naciimo Abwaan Qorane oo sheekadaan iyada ay ku dhacday.
Arinkan adigaanu kaa sugayna Jawaab !
War maya oo Axmad dusha ha ka saarin wax uusan lug ku lahayn oo uusan waxba ka qaban karin ee aynuu si kale uga wada xaajoono arinta gabadha.Sida la sheego Nimco Qorane waxaa loo xiray xamar baad aaday iyo soomaalinimaad noo keentay.Marka hore Nimco waa soomaali run ah.Marka labaad haddii ay nimco aadi lahayd Itoobiya lama xireen oo la isuma sheegeen in ay itoobiya aaday.Macnaha lamaba ogaadeen aadida Itoobiya ay aaday.Sababtoo ah qofkii reer soomalilaan ah ee aada meelaan soomaaliya ahayn dambi ma leh.Calaa kulli xaal maamulka Muuse Biixi waa in uu Nimco siiyaa mag dhaw.Magtaas oo sidaan kala ah.
1.Gabar soomaaliyeed ee wadankeedii joogta oo xabsi la dhigay oo ay waliba maxakamad ku sheeg ku xukuntay saddex sano oo ah xari adaga.
2.Gabadha sharafteedii oo meel looga dhacay oo lagu xiray si khilaafsan Diinta Islaamka iyo dhaqanka muslimiinta.
3.Gabadhaas oo dambi looga dhigay waxaad aaday meel ka mida soomaaliyada ad ku dhalatay oo ad u dhalatay.
4.Badhaas oo intii ay xiray lagu silic dilay xabsiga ay ku xirayd oo loo diiday kaalmo caafimaad oo ay aad ugu baahnayd in ay hesho.Waxaa kaloo loo diiday in ay ka qeyb gasho aaskii walaalkeed iyo sidoo kale in ay soo booqato aabaheed mar uu xanuunsaday.
5.Nimco mudadii ay xirayd waxaa la dhaafiyey wax Allaah wixii ay hawlo qabsan lahayd.Nimca hadddii markii la xiray ay ku jirtay waxbarasho waa la dhaafiyey.Haddii ayana shaqo haysey sidoo kale waa loo qoonsaday.
6.Nimco waxaa la saaray dambiya aysan galin oo waliba la xukumay oo lagu xukumay xabsi dheer oo ahaa three years.
7.Wareerkii iyo shidadii loo geeystay reerkeeda waa in laga siiyaa mag dhaw u qalma dambigii laga galay Nimco iyo reerkeeda.
8.Qarashkii ka baxay nimco iyo reerkeeda intii ay xirayd ee ku baxay arimo la xiriira xabsigii Nimco.
9.Dhaqaalihii uu qaatay garyaqaankii loo qabtay Nimco.
10.Iyo wixii daawo iyo nololshii kale qarash ku baxay intay xirayd nimco.
Tobankaas qodob iyo waliba qaar kaloo dhiman waa in Nimco laga siiyaa magdhaw deg-deg ah oo uu siiyaa mamulka Muuse biixi.10 -kaas qodob kan ugu magdhaw yar waa $5,000 oo ah usd.
Haddii an awoodaas yeelan lahaa saas baan Nimco ugu raadin lahaa xaqqeeda laga duusiyey.
Waxaan kaloo xukumayaa in ay dawlada soomaaliya Nimco u aragtaa in ay tahay qof la soo xumeeyey.Isla markaas dawlada soomaaliya ay Nimco siisaa waxkasta oo Nimco ay u qaban karto dawladu.Nimco waa in xamar laga siiyaa deegaan rismi ah iyo shaqo u qalanta Nimco.
waa qaran dumis ayadu